Shiinaha Model: JM272QE-144Hz warshad iyo soosaarayaasha | Muuqaal Dhamaystiran
Muuqaalka QHD waxaa si qurux badan u taageeray heer cusbooneysiin aad u xeel dheer oo ah 144hz si loo hubiyo xitaa isku xigxigyada dhaqaaqa inay u muuqdaan kuwo jilicsan oo faahfaahsan, waxay ku siinayaan geesinimadaas marka lagu ciyaarayo. Iyo, haddii aad haysato kaar muuqaallo isku mid ah oo AMD ah, markaa waad ka faa'iideysan kartaa tignoolajiyadda lagu dhex dhisay ee FreeSync si looga takhaluso jeexjeexa shaashada iyo turunturooyinka marka la ciyaarayo. Waxaad sidoo kale awood u yeelan doontaa inaad lasocoto maratoon kasta oo habeenka dambe ah, maaddaama kormeeraha uu leeyahay qaab shaashadeed oo yareynaya soo-gaadhista qiiqa iftiinka buluugga ah kana caawinaya ka hortagga daalka indhaha.
Astaamaha Muhiimka ah
27 "IPS panel oo leh 2560x1440 QHD Resolution
Waqtiga Jawaabta MPRT 1ms iyo Rate Refresh Rate 95Hz
Muuji Port + HDMI isku xirayaasha
Looma Quusan doono ama lagu jeexjeexi karo AMD FreeSync Technology
Gudiga IPS wuxuu keenaa xaglo muuqaal fiican
FlickerFree iyo Tiknoolojiyadda Muuqaalka Buluugga ah
Waa maxay heerka cusbooneysiintu?
Waxa ugu horreeya ee aan u baahannahay inaan dhisno waa "Waa maxay sida saxda ah heerka cabbirka?" Nasiib wanaagse maahan wax aad u adag. Qiyaasta cusboonaysiinta ayaa si fudud u ah tirada jeer ee shaashaddu cusbooneysiiso sawirka ay muujiso ilbiriqsi kasta. Waxaad ku fahmi kartaa tan adoo isbarbar dhigaya heerka filimada ama ciyaaraha. Haddii filim lagu duubo 24 wareeg ilbidhiqsi kasta (sida caadiga ah shineemada), markaa nuxurka isha laga helayaa wuxuu muujinayaa oo keliya 24 sawirro kala duwan halkii labaad. Sidoo kale, bandhig leh heerka bandhig 60Hz wuxuu muujinayaa 60 "loox" ilbiriqsi kasta. Xaqiiqdii maahan meegaarro, maxaa yeelay bandhiggu wuxuu cusbooneysiin doonaa 60 jeer ilbidhiqsi kasta xitaa haddii uusan hal pixel beddelin, bandhiguna wuxuu muujinayaa oo keliya isha lagu quudiyay. Si kastaba ha noqotee, isbarbardhiggu wali waa hab fudud oo lagu fahmo fikradda asaasiga ah ee ka dambeysa heerka cusbooneysiinta. Sicir cusbooneysiin sare ayaa sidaas darteed loola jeedaa awoodda wax looga qabanayo heerka jir sare. Kaliya xusuusnow, in muujinta kaliya ay muujineyso isha lagu quudiyo, sidaa darteedna, heerka cusbooneysiinta sare ma hagaajin karto khibradaada haddii heerkaaga dib-u-cusbooneysiintu uu horay uga sarreeyay heerka jir ee ishaada.
Markaad kumbuyuutarkaaga ku xirato GPU (Kaarka Sawirka Sawirka Sawirka) kormeeraha ayaa soo bandhigi doona wax kasta oo GPU u soo diro, heer kasta oo ay u dirto, ama ka hooseeya heerka jir ee ugu sarreeya ee kormeeraha. Heerarka xawaaraha dheereeya waxay u oggolaanayaan dhaqdhaqaaq kasta in lagu soo bandhigo shaashadda si habsami leh (Sawirka 1), oo leh hoos u dhac dhaqdhaqaaq. Tani aad ayey muhiim u tahay markaad daawato fiidiyowga degdegga ah ama ciyaaraha.
Cusbooneysii Qiimeynta iyo Ciyaarta
Dhamaan cayaaraha fiidiyowga waxaa bixiya qalabka kombiyuutarka, iyadoon loo eegin barmaamijyadooda ama sawiradooda. Badanaa (gaar ahaan barxadda kumbuyuutarka), looxyada waa la tufaa sida ugu dhakhsaha badan ee loo soo saari karo, maxaa yeelay tan badanaa waxay tarjumaysaa ciyaar jilicsan oo ka fiican. Dib u dhac yar ayaa ku imaan doona inta udhaxeysa qaab shaqsiyeed iyo sidaa darteed dib udhaca aqbasho yar
Dhibaatada mararka qaarkood dhici karta waa marka looxyada loo dhiibo si ka dhakhso badan heerka shaashadu cusbooneysiiso. Haddii aad haysato muuqaal 60Hz ah, kaas oo loo isticmaalayo in lagu ciyaaro ciyaar ka tarjumeysa 75 wareeg sanadkiiba, waxaad la kulmi kartaa wax la yiraahdo "jeexitaanka shaashadda". Tani waxay dhacdaa maxaa yeelay muujinta, oo aqbasha fikradaha GPU xoogaa waqtiyo goos goos ah, waxay u badan tahay inay soo qabato qalabka u dhexeeya looxyada. Natiijada tan waa jeexitaanka shaashadda iyo jahwareerka, dhaqdhaqaaqa aan sinnayn. Ciyaaraha badan ayaa kuu oggolaanaya inaad xaddiddo heerkaaga jir, laakiin tani waxay ka dhigan tahay inaadan u adeegsanayn PC-gaaga awoodiisa buuxda. Maxaad ugu qarashgareysaa lacag aad u badan qeybihii ugu dambeeyay uguna weynaa sida GPUs iyo CPUs, RAM iyo SSD drives haddii aad awoodo inaad awood u yeelatid?
Waa maxay xalka arintan, waad is waydiin kartaa? Sicir heer sare ah. Tan macnaheedu waa inaad iibsato 120Hz, 144Hz ama kormeeraha kombiyuutarka 165Hz. Bandhigyadani waxay la tacaali karaan ilaa 165 loox ilbidhiqsi kasta natiijada ka soo baxdaana waa mid aad u jilicsan. Kordhinta 60Hz ilaa 120Hz, 144Hz ama 165Hz waa farqi aad u muuqda. Waa wax ay tahay inaad adigu u aragto naftaada, mana sameyn kartid taas adoo daawanaya fiidiyoo ku jira bandhig 60Hz ah.
Si kastaba ha noqotee, heerka cusbooneysiinta la-qabsiga, ayaa ah tiknoolajiyad cusub oo goyn kara oo aad u soo kordheysa. NVIDIA waxay ugu yeertaa tan G-SYNC, halka AMD ay ugu yeerto FreeSync, laakiin fikradda asaasiga ahi waa isku mid. Soo bandhig leh G-SYNC ayaa waydiin doonta kaarka sawirada sida ugu dhakhsaha badan ee ay u soo gudbinayso looxyada, oo ay u habaynayso heerka cusbooneysiinta si waafaqsan. Tani waxay tirtiri doontaa jeexitaanka shaashadda ee heer kasta oo jir ah illaa heerka ugu badan ee cusbooneysiinta kormeeraha. G-SYNC waa tikniyoolajiyad ay NVIDIA ka qaado khidmad ruqsad sare waxayna ku dari kartaa boqolaal doolar qiimaha kormeeraha. FreeSync dhanka kale waa tiknoolajiyad furan oo furan oo ay bixiso AMD, waxayna kaliya kudartaa qadar yar kharashka kormeeraha. Anaga oo ah Display Perfect ayaan ku rakibnaa FreeSync dhamaan kormeerayaasha cayaaraha sida caadiga ah.
Miyaan iibsadaa G-Sync iyo FreeSync oo iswaafajiya kormeeraha ciyaarta?
Guud ahaan marka laga hadlayo, Freesync aad ayey muhiim ugu tahay ciyaarta, maahan oo kaliya in laga fogaado jeexitaanka laakiin waa in la hubiyaa khibrad guud oo jilicsan. Tani waxay si gaar ah run u tahay haddii aad socodsiinayso qalabka ciyaaraha ee soo saaraya meerayaal ka badan kuwa aad soo bandhigi karto.
G-Sync iyo FreeSync ayaa xal u ah labadan arimood iyagoo soo bandhigaya qaboojiye isku mid ah sida looxyada loo bixiyay kaarka sawirada, taasoo dhalisay ciyaar siman, ilmo la'aan.
Waa maxay HDR?
Heerarka firfircoon ee sarreeya (HDR) waxay abuureysaa isbarbardhigyo qotodheer iyagoo soo saaraya nashaad firfircoon oo sareeya. Kormeeraha 'HDR' wuxuu ka dhigi karaa waxyaabaha muhiimka ah inay u ekaadaan kuwo ifaya isla markaana soo gaarsiiya hooska hodanka ah. Kordhinta PC-gaaga oo leh kormeeraha HDR waa u qalantaa haddii aad ku ciyaarto fiidiyowyo muuqaallo tayo sare leh ama aad ku daawato fiidiyowyo xallinta HD.
Adigoon aad ugu dheerayn faahfaahinta farsamada, muuqaalka HDR wuxuu soo saaraa iftiin ka weyn iyo midab qoto dheer marka loo eego shaashadaha loo dhisay si loo waafajiyo heerarka hore.
1MS Waqtiga Jawaabta wuxuu yareeyaa ciribtirka iyo jahwareerka inta loo wareejinayo pixels, markasta oo cadowga & dhulku si sax ah diirada loo saaro xilliyada fowdada.
10 Soo saarida midabka waxoogaa ah wuxuu matali karaa inta udhaxeysa 0000000000 ilaa 1111111111 mid kasta oo ka mid ah midabada casaanka, buluuga, iyo huruudka ah, taasoo la micno ah in midkood uu matali karo 64x midabada 8-bit. Tani waxay soo saari kartaa 1024x1024x1024 = 1,073,741,824 midab, taas oo gabi ahaanba aad u tiro badan oo midabbo ka badan 8 bit. Sababtaas awgeed, qaar badan oo ka mid ah wejiyada muuqaalku waxay u muuqan doonaan kuwo ka jilicsan sida sawirka kore, iyo 10 muuqaal oo muuqaal ah ayaa si muuqata uga muuqan kara muuqaal ahaan kuwa 8-bit dhiggooda ah.
Hore: Tusaale: YM25BFN-165Hz
Xiga: Tusaale: OG34RWA-165Hz
144hz Monitor Monitor
1ms Monitor Monitor
24 Inch Monitor Monitor 144hz
Kormeerka Ciyaaraha Qalooca
Ciyaaraha Monitor 144hz 1ms